ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI) - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI)
မေ 28, 2018
အားလုံးအချိန်ဘောင်များအတွက်ကောင်းစွာ Wilder ရဲ့ကောင်းချီးစျေးနှုန်းအောက်ပါအညွှန်းကိန်း.
Wilder သည့်ဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ, သူက 14 ရက်ကြာ RSI သုံးပြီးအကြံပြုခဲ့သည်။. ထိုကတည်းက,9ရက်ကြာနှင့် 25 ရက်ကြာဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းညွှန်းကိန်းမှာလည်းလူကြိုက်များရရှိခဲ့ပါပြီ.
အဆိုပါ RSI ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၏တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာနည်းလမ်းကိုလုံခြုံရေးအသစ်တစ်ခုကိုမြင့်မားအောင်သောတစ်ဦးမတူကွဲပြားရှာရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် RSI သည်၎င်း၏ယခင်အမြင့်ဆုံးကျော်ဖြတ်ဖို့ပျက်ကွက်နေသည်. ဒါကမတူကွဲပြားတစ်ခုခါနီးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထားတဲ့အရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းထို့နောက်ချလှည့်နှင့်၎င်း၏မကြာသေးမီကကျင်းကိုအောက်တွင်ကျရောက်သည့်အခါ, ကပြီးစီးခဲ့ပြီဟု “ကျရှုံးခြင်းလွှဲ”. အဆိုပါပျက်ကွက်လွှဲခါနီးမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်၏အတည်ပြုချက်တစ်ခုစဉ်းစားသည်.
အဆိုပါဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းများသောအားဖြင့်အထက်ပါထိပ်ဆုံးမှ 70 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနဲ့အောက်ဆုံး 30. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်နောက်ခံစျေးနှုန်းဇယားရှေ့မှာဤထိပ်ဖျားနဲ့အောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာသော;
အဆိုပါ RSI မကြာခဏသို့မဟုတ်မ may စျေးနှုန်းဇယားအပေါ်မြင်နိုင်မည်အကြောင်းဇယားထိုကဲ့သို့သောဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးအဖြစ်ပုံစံများသို့မဟုတ်တြိဂံပုံစံ;
ပျက်ကွက်လွှဲ (ပံ့ပိုးမှုသို့မဟုတ် Resistance ထိုးဖောက်မှုသို့မဟုတ် breakouts)
အဆိုပါဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းယခင်အမြင့်ဆုံးနိုင်သောနေရာအရပ်ဖြစ်၏ (တောင်ထွတ်) ဒါမှမဟုတ်မကြာသေးခင်ကအနိမ့်ကိုအောက်တွင်ကျရောက် (ကျင်း);
အဆိုပါဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းပြပွဲ, တစ်ခါတစ်ရံပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့စျေးထက်, အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံ၏အဆင့်ဆင့်.
အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, စျေးနှုန်းအသစ်တခုမွငျ့မားစေသည်သည့်အခါသဘောထားကွဲလွဲဖြစ်ပေါ် (သို့မဟုတ်အနိမ့်) အသစ်တစ်ခုမြင့်မားသောကအတည်ပြုသည်မဟုတ် (သို့မဟုတ်အနိမ့်) အဆိုပါဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းအတွက်. စျေးနှုန်းများအများအားဖြင့်မှန်ကန်နှင့် RSI ၏ညှနျကွားထဲမှာပြောင်းရွှေ့.
RSI = 100-(100/(1+ဦး / D ကို))
ဦး - အပြုသဘောဆောင်သည့်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများပျမ်းမျှအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်;
: D - အနုတ်လက္ခဏာစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများပျမ်းမျှအရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်.
ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI) တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI) သာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်းကိန်းကို install လုပ်နည်း (RSI).mq4?
ဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်း Download (RSI).mq4
Copy ကူးဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI).သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်းပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး (RSI).mq4
indicator ဆွေမျိုးခွန်အားအညွှန်း (RSI).mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
ဆွေမျိုးခွန်အားညွှန်းကိန်းဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို (RSI).သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ mq44ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးultra - ATR ဦးရေပြား tool ကို